Ime ihe ike ọ bụ ọrụ dị mma maka nkịta gị? - Ọzụzụ Nkịta
Organizationstù ndị na-eme mkpọtụ na-eji ụfọdụ ụdị nmali na agility agility.
Nkịta nkịta bụ egwuregwu a na-enye onye na-elekọta ya oge a ga-eji dozie nkịta ịpụ site na usoro mgbochi.
N'ịbụ nke a na-esetịpụ aka na asọmpi egwuregwu nke ndị egwuregwu na-agba ọsọ, egwuregwu a amalitela ihe mgbochi ndị ọzọ, usoro ntinye na arụmọrụ arụmọrụ.
Agility mere mmalite ya ka ọ bụrụ ihe ntụrụndụ maka ndị nkiri na Crufts Dog Show na 1979; ọ bụ kemgbe ọ ghọrọ egwuregwu nkịta na-eto ngwa ngwa na England, Western Europe na North America. Ndị na-ekiri ihe nkiri na-aga n'ihu taa ka ejide ha na-ekiri nkịta na onye na-ahụ maka ịnụ ọkụ n'obi na asọmpi egwuregwu ha megide elekere.
Na United States, enwere ọtụtụ mba dị iche iche maka ịdị ike nke na-anwale ule ma ọ bụ ọnwụnwa ndị klọb na-enye ọzụzụ na nkịta. Ọnwụnwa ndị dabere na iwu mba ụwa na nkọwapụta dị iche iche na-akpọ nkasi obi kachasị elu site na nkịta ma na ọsọ na ikike anụ ahụ iji mee ihe mgbochi.
Enwekwara egwuregwu dị iche iche nke anụ ụlọ na-akpọ obere nkụda mmụọ (site na iji elu dị elu na obere mgbochi) site na nkịta ma lekwasị anya na njikwa egwuregwu.
Enwere ọtụtụ ihe mgbochi dị iche iche dị iche iche:
Taya ma ọ bụ Hoop Jump
Dị iche iche nke Jumps
Ejiri ihe nchebe na ihe nkiri na-echebara ihe mgbochi ndị ejiri mmụọ ọrụ rụọ ọrụ. All jumps nwere mfe displaceable Ogwe nke na nkịta na-agaghị enwe ihe ọjọọ kwesịrị ya misjudge ma na-agbada a wụliri mmanya.
Ihe mgbochi niile nkịta ga-emerịrị n’anụ nwere mpaghara ‘ịkpọtụrụ’ nke e sere na akụrụngwa ahụ; mpaghara kọntaktị na-akwado usoro ọzụzụ ọzụzụ dị mma ebe ọ bụ na ndị na-ahụ maka ọrụ maara na nkịta ga-emejọ belụsọ ma otu ụkwụ ma ọ bụ karịa nọ na mpaghara kọntaktị ahụ mgbe ọ na-arịgo / na-agbadata ihe mgbochi ndị a. All akụrụngwa akụrụngwa na-ebupụta na-roughened nke ọma traction ma akọrọ na mmiri ihu igwe.
Na asọmpi, a na-ahazi ihe mgbochi na nhazi usoro dịgasị iche iche, na-adịkarị iche site na nnwale na nnwale, na-enye ọkwa nke nsogbu ndị kwesịrị ekwesị na klas na ahụmịhe nkịta na-asọ mpi. Ndị na-ejide ha ga-eduzi nkịta ha gburugburu usoro ahụ nke onye ọka ikpe kpebiri.
Na ọkwa ntinye nke asọmpi, usoro ọmụmụ nwere obere nsogbu ma bụrụkwa ule iji gosipụta na nkịta nwere ike ịrụ ọrụ ahụ n'ime oge kwesịrị ekwesị. Dika nkịta na onye nchịkwa na-enweta ụzọ ha n'ime ọkwa dị elu karị, ihe ọmụmụ ahụ na-abawanye na mgbagwoju anya wee malite ịchọ nkewa oge na nhazi n'etiti onye na-elekọta ya na nkịta iji mezuo usoro ahụ n'ime 'Standard Course Time' (SCT) nke ọkàikpe.
Iwu ndị dị mfe; Ndị njikwa nwere ike inye ndị nkịta ọtụtụ iwu ma ọ bụ akara aka na nkịta ha, mana ha nwere ike imetụ ma akụrụngwa ma ọ bụ nkịta ahụ aka. Nkịta 'mejọrọ' maka omume dị ka iwetu ebe na-awụlikwa elu, ịghara itinye otu ma ọ bụ karịa ụkwụ na nchekwa ma ọ bụ mpaghara ịkpọtụrụ mgbe ị na-arịgo / na-agbadata akụrụngwa kọntaktị, na-ewepụ ihe mgbochi na usoro, ma na-agba ọsọ gara aga ma ọ bụ na-akwụsị tupu ihe mgbochi ọzọ a ga-arụ. A na-enyocha ntaramahụhụ oge megide ndị nkịta karịrị SCT.
Ndị nkịta na-asọ mpi naanị megide nkịta ndị yiri nke ahụ dị elu na nkụ n'ime ọnụọgụ nke elu nkewa. Ọnụ ọgụgụ nke nkewa dị elu na oke nkịta dị elu e kenyere nkewa dị elu (yabụ ihe isi ike) dị iche na nzukọ na nzukọ. N'agbanyeghị nzukọ ahụ, nkịta nwere ọnụ ọgụgụ kachasị njọ na oge kachasị ọsọ na-emeri klaasị ma ọ bụ nkewa dị elu.
Dị Bdị Dị Iche
Ọnwụnwa agility na-emeghe nkịta niile, ma ụdị anụ ọcha na nke agwakọtara.
Nkịta ndị na-ajụ ase nke na-esite n'ụdị dị iche iche na / ma ọ bụ ahịrị ozuzu nke jigidere ikike izizi ha na-enwekarị ga-abụ ọganiihu na asọmpi agility. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị na ọ dịghị otu ụdị na-achịkwa ọnwụnwa agility, ndị mmadụ pụtara ìhè nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ụdị ọ bụla na-eme nke ọma ma na mpaghara na mba.
N'ihi ebumnuche egwuregwu nke egwuregwu a chọrọ, nkịta ndị na-esighi ike site na okike ime ihe kwekọrọ n'ụdị anụ ahụ maka ụdị ha anaghị ahụkarị ma ọ bụ nwee ihe ịga nke ọma n'ụdị egwuregwu ahụ dabara na iwu mba ụwa (USDAA na AAC). Nkịta ndị a nwere ike ịga nke ọma, agbanyeghị, n'ụdị ụlọ dị mkpa ka enwee ahụ ike (AKC, UKC na NADAC). Nke a metụtara ọkachasị nnukwu, ụdị nnukwute anụ ọhịa na ruo ogo ụfọdụ, ụdị mkpụ ụkwụ dị mkpụmkpụ.
Nkịta ga-abụ na ọ dịkarịa ala ọnwa 6 (UKC) ma ọ bụ 12 (AKC) dị afọ iji sonye na ikpe a na-eme n'okpuru mgbanwe dị iche iche nke ụlọ ma ọ dịkarịa ala ọnwa iri na asatọ iji merie ọnwụnwa emere n'okpuru iwu mba ụwa (USDAA, AAC, na NADAC).
Ọ bụ ezie na ọzụzụ kachasị mma bụ site na nkịta na-eto eto toro eto, ụfọdụ ọzụzụ agility nwere ike dabara adaba ụmụ nkịta; nke a gụnyere ọrụ ọwara, wụda ala karịa elu ikpere ụkwụ, na ọzụzụ nchịkwa nchịkwa. Ọrụ akụrụngwa (ya bụ A-frames, Dog Walks, and See-saw) kwesịrị igbu oge yana / ma ọ bụ wetuo ya ala rue mgbe nwa nkita ahụ mepụtara nhazi anụ ahụ dị mkpa iji kparịta plank agbadoro n'elu ala.
Ekwesịrị ịkwụsị ọrụ ịgba egwu na ịkpa ákwà kpamkpam ruo mgbe nwa nkita ahụ torola ogo. N'ihi oke mmetụta na-adịghị mma nke ịwụ elu na ịkpụgharị na akaghi aka, ọkpụkpụ na-eto eto, a gwara ndị nwe ka ha nyochaa ụdị ha nke ọma ma bido ịmalite ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ nke ụdị a mgbe nkịta gafere afọ nke a maara 'mbadamba uto' iji mechie ụdị ahụ. Ntuziaka na-adịchaghị mkpa maka mmechi efere na nkịta ndị agwakọtara ga-abụ ọnwa 9 - 12 maka nkịta n'okpuru 50 pound na ọnwa 10-14 maka nkịta karịrị 50 pound.
Ọtụtụ nkịta na-enwe ike isonye ma na-eme nke ọma na agility ruo mgbe ha ruru 8-10 afọ. Ndị nwe ha ga-eji nke nta nke nta zụlite ọzụzụ ha na asọmpi iji gbochie ugwu na klaasị kwesịrị ekwesị na 'ndị agha ochie ha' ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịga n'ihu n'oge ahụ.
Trainingfọdụ nkuzi nrube isi dị mkpa tupu ịmalite ọzụzụ ọzụzụ. Ma ọ dịkarịa ala, nkịta ga-enwe ike ịnọdụ ala, nọdụ ala, na-abịa ngwa ngwa mgbe a kpọpụrụ ya, nọrọ obere oge, jigide njikwa na nkịta ndị ọzọ, yana ịnabata njikwa nke ndị bịara abịa. Off-leash heelwork bụ nnukwu gbakwunyere ma ọ bụghị achọrọ. Na mgbakwunye, onye na-enye ọzụzụ / onye nchịkwa nke gbara nkịta ha ume ka ọ kpọọ nkịta ga-enwe uru ọzụzụ pụrụ iche karịa onye na-enweghị.
Ọrụ agility na mbido na-amalite site na iwebata nkịta obere na / ma ọ bụ obere ụdị nke mgbochi. Ogologo na / ma ọ bụ ogologo nke akụrụngwa na-eji nwayọọ nwayọọ gbasaa ọtụtụ oge ọzụzụ na ụdị asọmpi ha niile. Nkịta n’oge a nke ọzụzụ chọrọ ‘ntụpọ’ nke anụ ahụ yiri nke ọzụzụ mmega ahụ mgbe ha na-azụlite nkà na ntụkwasị obi dị mkpa na ihe mgbochi. Leashes na-enyekarị ngwa ngwa n'ihi na ha nwere ike ịdaba na nkịta na / ma ọ bụ akụrụngwa.
Ejila usoro eji arụ ọrụ ma ọ bụ olu olu na-etinye mmezi anụ ahụ nke ụdị ọ bụla; ha na-akpaghasị ịnọgide na-enwe nguzozi & nhazi anụ ahụ (ma nwee ike ibute mmerụ ahụ) ma ga-eme ka nkịta ghara ịnwe ohere iji nwee obi ike n'ụzọ anụ ahụ na n'uche na ya nwere ike ịmekọrịta akụrụngwa ahụ n'enweghị nsogbu. A na-ejikarị nri, otuto, na ịchọta / ụdị ihe eji eme ihe na-eme ka nkịta na-arụ ọrụ na ịchọta ntụpọ nke na-arata nkịta ma kwụghachi ya ụgwọ iji rụọ ọrụ ahụ.
Ozugbo nkịta ahụ mụtara ọrụ mgbochi, nkịta na-abanye na usoro ọzụzụ ọzọ. N'oge a, onye na-ahụ maka ọrụ na-arụ ọrụ iji nwayọ nwayọ dozie nkịta ahụ ka ọ gbagoo elu na ihe mgbochi dị elu, na ịzụlite 'iwu okwu' na-arụ ọrụ nke okwu olu na ahụ dị mkpa iji dọọ nkịta ahụ aka na-agagharị.
Otu nkịta a zụrụ azụ nke a zụrụ na-amụta ịzaghachi ozugbo na iwu na-eduzi ya ịme ihe mgbochi ụfọdụ (mgbe a na-etinye ihe mgbochi ozugbo n'akụkụ ibe ya) yana iwu na-eme ka ọ na-agba ọsọ ọsọ / nwayọ, tụgharịa aka ekpe / aka nri wee pụọ / nso onye na-elekọta ya. N'ebe kachasị elu nke asọmpi agility, enwere ike ịhụ nkịta nwere ike ịme iwu ndị a ma na-emegharị ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi ọbụlagodi mgbe ị na-arụ ọrụ zuru oke ọtụtụ yards site n'aka ndị na-elekọta ha (nke nwere nwayọ nwayọ).
Ntụle Ahụ Ike
Ọ bụghị nkịta ọ bụla kwesịrị ịrụ ọrụ ma nwee ike merụọ ahụ ma ọ bụ mee ka ọnọdụ dị adị karịa ma ọ bụrụ na onye nwe ya anaghị eme nyocha tupu ya abanye na ọzụzụ nke ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ. Nlere ule tupu oge nyocha kacha mma kwesịrị ịgụnye ikpere, ikpere, na nlele anya.
Ekwesịrị ịgwa ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ihe ezubere maka nkịta ahụ na nkịta ahụ ka a ga-ezigara ma hip & elbow dysplasia. Onye nwe ya kwesiri icheghari atụmatụ ha maka ime ihe ike ma oburu na nkita choputara ihe obula di ala karie ‘Fair’. Ọhụhụhụhụhụ ụzọ na-adịghị oke egwu.
Ebe ọ bụ na agility bụ ụdị asọmpi nkịta ọhụụ, ọ bụghị ihe ọhụrụ na vetiran ahụ amaghị ihe chọrọ maka agility. N'okwu a, ọ bụ ihe enyemaka nye onye nwe ya ịnwe obere vidiyo (nkeji 2-3) nke nkịta na-arụ ọrụ ahụ; nke a ga-eme ka vetiran vetikal mara nke ihe anahu anya di nkpa maka egwuruegwu.
Ma onye nwe ya ma onye dọkịta na anụmanụ ga-echebara oke nkịta ahụ echiche. Kedu ihe dị ezigbo mma maka anụ nkịta nwere atụmanya ọrụ nkịtị nwere ike ịdị oke arọ maka ọzụzụ na ịsọ mpi. Arụ ọrụ na-adịghị mma ma ọ bụ mmerụ ahụ, nke nwere ike ịgụnye mgbu akwara na mmerụ anụ ahụ ndị ọzọ dị nro, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile n'ihi 'ọrịa ngwụsị izu' - ya bụ na nkịta buru oke ibu na / ma ọ bụ enweghị ọnọdụ kwesịrị ekwesị.
Ọnọdụ na-aga n'ihu na ọzụzụ akụrụngwa dị mkpa iji mee ka nkịta nkịta na-arụ ọrụ dị elu na enweghị mmerụ ahụ. Mmega ahụ na-ebu ibu bụ nke kachasị dabara adaba; ihe atụ na-ejegharị ejikọrọ na obere sprints ọnọdụ ma nkịta na njikwa. Ogologo oge, obere na ala egwuregwu nke bọl na / ma ọ bụ frisbee na-enye aka karịsịa maka iwuli obi na akwara na / ma ọ bụ ikike muscular. Igwu nwekwara ike ịba uru iji meziwanye obi obi na ike.
Ihe mgbochi na-achọ ihe kachasị mkpa (ọkachasị maka ịdị ike mba ụwa) bụ jumps. Iji mee ka nkịta nwee ike itinye aka na mmụba nke egwu achọrọ maka ọzụzụ na ịsọ mpi, nkịta agaghị enweta naanị obi na akwara, ọ ga-enwerịrị usoro ọkpụkpụ dị mkpa. A na-eji nwayọọ nwayọọ mee ka ọkpụkpụ skeletal rụọ ọrụ site na iji ọkara ma ọ dịkarịa ala ọnwa 6-9 nke ọzụzụ na ebe dị elu dị elu; nke a na - ebelata mmetụta n’ọkpụkpụ ma na - eji nwayọọ nwayọọ na - etolite ọkpụkpụ iji wee sie ike ma zụlite ike achọrọ na ebe ndị ziri ezi iji nagide mmetụta ọdịda mgbe ịwụsịrị.
Ọnwa ndị a nke ọzụzụ ọzụzụ dị elu bụ oge dị mma maka onye njikwa iji rụọ ọrụ na ịzụlite okwu iwu nkịta. Ozugbo oge nkwenye a rụchara, a ga-enwe ike ịwụli elu ahụ na ọzụzụ ruo mgbe nkịta zuru oke nke nkịta ga-eru ma nwee ike ịtụle asọmpi n'ezie.
Fọdụ nlekọta anụ ahụ na-aga n'ihu na-adị mkpa yana iji gbochie mmerụ ahụ ma na ọzụzụ ma ọ bụ asọmpi. Karịsịa, a ga-edebe ntu na azụ mgbe niile ka ha wee ghara ijide akụrụngwa ma ọ bụ gbochie traction nke nkịta.
Sacrificefọdụ na-achụ àjà na ọdịdị nkịta ga-anakwere n'ụdị ndị ahụ nwere ọtụtụ ntutu isi ma ọ bụ banyere anya; a ghaghị idozi ntutu a ma ọ bụ kegide ya ka ọ ghara igbochi ọhụụ nkịta.
Chibuahua Golden Retriever mix: Otu n'ime ngwakọ kacha mma?
Pitbull Boxer Mix: Nduzi Kachasị Ego Nduzi Nke a Na-aghọrọ Bouncy Boxer Mix
nkịta na -agbalị ịgbọ agbọ mana ọ nweghị ihe na -apụta
ole ka nwa nkita dị ọnwa anọ na -ehi ụra
aha nkịta maka labs nwoke
onye ọzụzụ atụrụ Ọstrelia agwakọtara ya na spaniel cocker
aha husky nwanyị na ihe ọ pụtara